1.Steps Si Access iCloud.Com
2.Steps si ay u helaan iCloud via gacanta guddi iCloud
3.Accessing iCloud kaabta la wondershare Dr.fone u macruufka
iCloud waa mid ka mid ah madal daruur ugu isticmaalay maxaa yeelay waxa kuu ogolaanayaa inaad ku kaydiso faylasha aad meel dhexe iyada oo aan u baahan in meel bannaan oo ku qalab aad. Haddii aad tahay user Apple ah, waa in aad la isticmaalo samaynta smart ee xisaabtaada iCloud. Haddii aad tahay ilaa xad ku cusub iCloud, waa kaa hage ah in la fahmo sida ugu kala duwan kuwaas oo aad ka heli karto iCloud.
In kastoo ay jiraan dulduleelo ammaanka yar ee kaydinta warbaahinta faylasha aad iyo faahfaahinta kale ee aad xisaabta iCloud, mid is illowsiin kartaa isticmaalka kaas oo u leeyahay in ay bixiyaan.
Talaabooyinka Si aad u hesho iCloud.com
Marka aad raadinayso si ay u helaan xisaabtaada iCloud, ka dib waa tallaabooyinka fudud oo aad u baahan tahay in la raaco.
• Waxaad u baahan tahay in ay gasho si http://www.icloud.com/
• Marka aad jiraan, isticmaasho aqoonsiga login iCloud in ay helaan in aad xisaabta iCloud.
• Haddii aad tahay qof cusub, waxaad samayn kartaa id cusub iyo password ay si fudud u galaan aad email iyo ka jawaabidda su'aalaha ku qoran.
• Marka aad leedahay aqoonsiga ee aad la, soo galaan isku website-ka iCloud.
• Marka aad saxiixay, waxaad samayn kartaa aragtida files oo aad ku badbaadi sahamin faahfaahinta.
• Xusuusnow, ma jirto si ay u helaan goobta iCloud ka iPhone ama iPad. Sababtu waxa weeye in ay ku dhiirigelinayaan in Apple helay gabi ahaanba looma baahna in ay bixiyaan goobta iCloud sida ku jira oo dhan oo ku saabsan xisaabtaada iCloud horey u jooga qalab aad.
• Si kastaba ha ahaatee, waxaad dooran kartaa browser ah sida Chrome ama xataa Mercury oo ay doortaan in ay u arkaan goobta desktop ah iCloud iyo raac tallaabooyinka la mid ah si ay u helaan.
Talaabooyinka ay u helaan iCloud via iCloud Control Panel
Haddii aad raadinayso si ay u helaan xisaabtaada iCloud iyadoo la kaashanayo guddi gacanta, aad samayn karto in sidoo kale.
• Tallaabada ugu horreysa waa inaad kala soo baxdo guddi gacanta iCloud ee daaqadaha.
• Waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee Apple lafteeda oo kuu ogolaanaya in aad u hagaagsan waxa ku jira qalab Apple aad aad kombuutarka daaqadaha.
• Waxaad la keeneen in doontaa aqoonsiga id Apple oo aad u baahan tahay inay la soo wareegto in iyaga la.
• Waxaad arki doontaa liiska adeegyada iyo files kala duwan oo la synced doonaa. Waxaad dooran kartaa kuwa aad doonayso in aad u hagaagsan aad kombuutarka.
Helitaanka kaabta iCloud la Dr.fone wondershare u macruufka
Hadda oo aad hore waa ay ka warqabaan ay siyaabo kala duwan oo ah helitaanka xisaabtaada iCloud, hadda waxaan eegi doonaa tallaabooyinka fudud si ay u helaan gurmad iCloud ah. Mid ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee iCloud waa in ay kor u taageeray content, kuwaas oo loo isticmaali karaa soo celinta xaaladaha khasaaraha xogta.
Wondershare Dr. Fone ee macruufka waa iPhone iyo iPad software kabashada xogta ugu horreeya adduunka ee. Ina keena aynu aragno sida aad u heli kartid gurmad iCloud iyo soo celinta qalab aad
• Burcad software ah aad kombuutarka.
• Wondershare Dr. Fone ee macruufka bixiyaa noocyada kala duwan ee hababka soo kabashada. Waxaad u baahan tahay in ay qaado 'ka soo kabsado iCloud files gurmad'.
• Marka aad doorato Doorashadan, markaas ka dib waxaad la keeneen in doontaa iCloud aqoonsiga account login.
• Ku qor faahfaahinta. Waxaad ku nasan karaa sugan oo ku saabsan ammaanka.
• Marka aad qortey in aad xisaabta iCloud, markaas ka dib waxaad arki doontaa liiska kala duwan iCloud files gurmad oo ay joogaan in aad xisaabta.
• Waxaad arki kartaa timestamp oo isticmaal faahfaahinta kuwaas oo si aad u hesho gurmad ah oo aad rabto in aad soo kabsado.
• Riix badhanka download taas oo jooga file gurmad ka ag.
• daaqad cusub arbushin doonaa oo ku weydiin doonaa inaad doorato faylasha aad rabto in aad soo kabsado.
• Dooro kaliya faylasha aad u baahan tahay, maxaa yeelay weyn files ah, in ka badan noqon doontaa markii ugu download.
• Marka aad ka dhigay doorashada, ka dhacay 'socda' ka dibna riix badhanka 'baaritaan'.
• Ka dib markii raajo la sameeyo, waxaad ka heli doontaa liiska xogta ku jirta faylka gurmad ah.
• Waxaad ku eegaan karo xogta dooro kuwa aad rabto in aad soo kabsado.
• Hit badhanka soo kabsadaan ka dibna iyaga ku badbaadin ugu caga doonayo.
Iyadoo talaabooyinkan, waxaad si fudud u heli karaan iCloud files gurmad iyo xitaa soo celin xog tirtiray sidoo.
> Resource > iCloud > 3 Siyaabo Sahlan ee Access iCloud